ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း -5လေ့ကျင့်ခန်းအကြံပြုချက်များ Wear
Home » သတင္းေၾကျငာခ်က္ »5လေ့ကျင့်ခန်းအကြံပြုချက်များ Wear
သငျသညျအထဲကအလုပ်လုပ်ပြီအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအဘယ်သူမျှမကိစ္စ, တိုင်းလူတစ်ယောက်သူသို့မဟုတ်သူမအားကစားခန်းမသွားတူသောခံစားရပါဘူးတဲ့အခါမှာရက်ပေါင်းရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရက်ပေါင်းတွင်ပြုလုပ်အိပ်ရာနေနှင့်နှိုးဆော်သံအပေါ်တစ်မှေးအိပ် button ကိုဝင်တိုက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်လာအောင်နှိုးဆွနိုင်ပါတယ် အထဲကအလုပ်လုပ် လက်ျာယလေ့ကျင့်ခန်းဂီယာကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်။
အဘယ်သူသည်အသစ်ကဖိနပ်တရံကိုမုန်း? သငျသညျအခြို့သောလှုံ့ဆော်မှုချင်လျှင်, သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းဂီယာမှ Sneaker တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သော pair တစုံကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်, သင်သည်သင်၏အားကစားရုံမတ်မတ်အများစုကိုက်ညီသောတရံရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျဤသို့ပြုသည့်အခါ, သင့်ကိုယ်သင်နှင့် ပတ်သက်. အကောင်းခံစားစတင်ဖွစျလိမျ့မညျ အားကစားရုံ hit ဖို့အဆင်သင့် နံနက်ယံ၌ပထမဦးဆုံးအရာ။
သင်တောက်ပဖိနပ်ကိုကြိုက်လျှင်, သင်ပင်အားကစားခန်းမအပြင်ဘက်သူတို့ကိုဝတ်ထား start ပေလိမ့်မည်။ သင်သည်လက်ျာ pair တစုံကိုထုတ်ကောက်နေအချို့အကူအညီလိုအပ်ပါသလား? သင်သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာအားကစားကုန်ပစ္စည်းစတိုးဆိုင်ထိမှန်နှင့်၎င်း၏အမှုထမ်းတဦးထံမှအကူအညီတောင်းခံသင့်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသင်၏ခြေကိုနေရာချထားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားချဲ့မနေတော့ကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟုလက်ျာ pair တစုံကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
သငျသညျရှေးခယျြသငျ့ရဲ့အရောင်ကိုမတှေ့နိုငျလြှငျ, သင်အွန်လိုင်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းဖိနပ်ကိုဝယ်ယူသည့်အခါမှားအရွယ်အစားဝယ်ယူရှောင်ရှားရန်သတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကိုအလားတူကြောင့်သင်အရွယ်အစားဇယားကိုကြည့်သေချာလုပ်ပါ။
သင်အားကစားခန်းမအပြင်ဘက်ဝတ်ဆင်နိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်းအဝတ်ပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျအပျော့ချွေးတ်ဆင်တဲ့အခါမှာသငျသညျအပျော့စောင်အတွက် swathed လျှင်အဖြစ်, သင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ သင်အားကစားခန်းမများအတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့တဲ့အခါမှာအချိန်ဖြုန်းလေ့ အကယ်. အလုပ်ခွင်စားဆင်ယင် codes တွေကိုလျော့နည်းတင်းကျပ်ဖြစ်လာသောကြောင့်, သငျသညျအလုပ်မလုပ်ဖို့သင့်ချွေးတဝတ်ထားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
သငျသညျအလုပျလုပျဖို့ချွေးတ်ဆင်ထားလျှင်, သင်အားကစားခန်းမ hit မတိုင်မီပြောင်းလဲနေတဲ့ဆယ်မိနစ်ဖြုန်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်အားကစားရုံအပြင်ဘက်ကိုသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သင်တစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျအဆင်ပြေအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ကြသောအခါ, သင်မယ့်အစားလမ်းလျှောက်များ၏လှေကားကိုတက်ပြေးဖို့ပိုတျသှငျးခံခံစားရပါလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့၏ဘက်စုံမှကျေးဇူးတင်ပါသည် leggings ဖက်ရှင်အဓိကရန်လေ့ကျင့်ခန်းအဝတ်ကနေဘွဲ့ရပါပြီ။ စျေးဝယ်တဲ့အခါ, သငျသညျအလွန်ခွင့်လွှတ်ဖြစ်ကြောင်း silhouette, အသံကျယ်ပုံစံများ, ကျယ်ပြန့် waistbands နှင့်ပျော့ပျောင်းသောအထည်ကိုဖြတ်ပြီးလာပါလိမ့်မယ်။ ရာသီဥတုမှိုင်းနှင့် dreary သည်ဆိုပါက, သင်သည်သင်၏ဝိညာဉ်များဆောင်ခဲ့ခြင်း leggings တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်တစ်စုံ Don နိုင်ပါတယ်။
သင်အွန်လိုင်း leggings တရံစျေးဝယ်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏အတိအကျတိုင်းတာကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ, သငျသညျကဲ့သို့သော bespoke leggings ဝယ်ယူလျှင် MoveU အားဖြင့်ထုံးစံ leggingsသင်သည်သင်၏အတိအကျတိုင်းတာပေးသင့်ပါတယ်။
သင့်အနေဖြင့်အားကစားရုံတစ်ရှုးထိပ်တန်းဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အပျော်အပျက်ဘက်ချွတ်ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာအနည်းငယ်တဟီဟီရယ်ကမီးပွားချရန်နှင့်စကားစမြည်စတင်နိုင်ရန်သူချင်းအားကစားရုံ goers လာအောင်နှိုးဆွပေလိမ့်မည်။ သင်ပြောသောနှင့်သင့်ခံစားချက်တွေကိုပြတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်ကထိန်သိမ်းပယ်ထိုကဲ့သို့သောထိပ်ကိုဝယ်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုသင့်အဘို့အထူးသဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်ရှိနိုင်ပါသည်။
သင်ပစ္စည်းပစ္စယ Struts ရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုက်ညီမယ့်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်မှန်၌သင်တို့၏ထိပ်တန်းတစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းကိုဖမ်းအခါတိုင်းရယ်မောထွက်ကွဲနိုင်လျှင်, သင်သည်သင်၏ဝိညာဉ်များရုတ်သိမ်းပေးရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒူးတက်သွားကြောင်း compression ခြေအိတ်သင့်ရဲ့ခြေထောက်အတွက်စောင်ရေတိုးမြှင့်လျက်ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ရှုစေပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် varicose သွေးပြန်ကြောမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်အဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြောင်းနှင့်အားကစားရုံ၌သင်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ compression ခြေအိတ်ကိုလည်းအမှန်တကယ်တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်လမ်းကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်းစဉ်းစားကောင်းတစ်ဦးအရာမူသောသင်တို့ကြွက်သားတစ်သျှူးအတွက်အရည်များစုစည်းနေခြင်းကိုတားဆီး။
သင်အားကစားခန်းမမှဘောင်းဘီတိုသို့မဟုတ် leggings ဝတ်ဆင်ရန်ရှိမရှိအံ့သြနေတယ်ဆိုရင်, compression ခြေအိတ်တစ်စုံ donning သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်အချိန်အတွင်းသင်သည်သင်၏ခြေထောက်ပေါ်အမြဲရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအလုပ်မလုပ်ဖို့သင့်ချုံ့ခြေအိတ်ဝတ်ထားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဤနည်း, သင်အများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်အသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်ဆိုလိုတာကကြာကြာအဘို့ထိုသူတို့အပေါ်ရပါလိမ့်မယ်။
တတ်နိုင်, ပျော်စရာ, နှင့် comfy ယလေ့ကျင့်ခန်းဂီယာကိုသင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိ အချိန်မ၌တည်၏။ ထိုမှတပါး, သင်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လူနေမှုပုံစံရှိခြင်းရန်သင့်လမ်းပေါ်ပါလိမ့်မည်ဆိုလိုတာက, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုပိုကောင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ဧပြီလ 26, 2018 FitnessRebates သတင္းေၾကျငာခ်က္, အဝတ်အစား မှတ်ချက်မရှိ